बिजुलीले उज्यालियो दार्मा – News Portal
November 9, 2019 epradeshLeaveaComment on बिजुलीले उज्यालियो दार्मा
दार्मा, २३ कार्तिक । वर्षौंदेखि अँध्यारोमा रात कटाइरहेका दर्मालीहरू बुधबार साँझ जनज्योति मावि फारूलाचौरको प्राङ्गणमा नाचगानसहित रमाइरहेका देखिन्थे । लामो प्रतिक्षापछि बुधबार गाउँपालिकाको केन्द्रलगायत पाँचवटा वडामा पुग्ने गरी विस्तार गरिएको विद्युत लाइनको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले उद्घाटन गरेका हुन् ।
दिउँसो २ बजे सुरू हुने भनिएको कार्यक्रमका सहभागी साँझ साढे ५ बजे कार्यक्रम सुरू हुँदा पनि उस्तै उत्साहका साथ कार्यक्रम स्थलमा मन्त्रीको प्रतीक्षामा थिए । मन्त्रीले बिजुलीको स्वीच थिचेसँगै स्थानीयहरू खुसीले नाचेका थिए । कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाका वडाबाट झाँकीसहितको टोली सहभागी थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अबको दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई अन्धकारमुक्त बनाइने घोषणा गरे । मन्त्री पुनले सडक, विद्युत, खानेपानी, सिंचाईजस्ता प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
गाउँपालिकाको विद्युत विस्तार संघीय सरकारको लागि सानो योजना भएपनि जनताको लागि लामो प्रतीक्षाको फल भएको बताउँदै उनले यसले दर्माली जनतामा उत्साह थपेको बताए । उनले कार्यक्रममा उपस्थित कर्णाली प्रदेश नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रमुख तथा जिल्ला प्राधिकरण प्रमुखलाई विद्युत विस्तारमा तिब्रताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए ।
‘पोल गाडेकोमा तत्काल तार तान्नुस् अनि तार तानेकोमा विद्युत वितरण गर्नुस्’ उनले भने ‘बाँकी के कति विद्युत नपुगेका स्थानहरू छन् योजना बनाएर सरकारलाई तत्काल पठाउनुस्, हामी बजेट छुट्याउँछौँ ।’
संघीय सरकारको दृष्टि नपुगे पनि स्थानीय सरकारले जनताका आवश्यकता पूरा गरिरहेको बताउँदै उनले भने ‘स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी छ ।’
विगतमा पहुँचको आधारमा विकास हुने स्थिति संघीयता आएसँगै अन्त्य भएको बताउँदै नले प्रादेशिक सन्तुलन कायम गरेर सरकारले विकास गरिरहेको धारणा राखे । समृद्धिको अभियानमा सरकार रहेको भन्दै उनले अब गरिबीको रेखामुनी रहेकाहरूलाई पनि दुई छाक खान पाउने र आफ्नै घरमा बस्न पाउने अवस्थाको ग्यारेन्टी गरिने बताए ।
लिफ्ट, भूमिगत सिंचाईका योजना बनाई उत्पादकत्व बृद्धि गरिने भन्दै मन्त्री पुनले कृषि उपजमा आत्मनिर्भरका साथै निर्यातको आधार तयार गरिने बताए ।
सल्यानमा सडक सञ्जाल विस्तारमा आफ्नो ध्यान तानिएको भन्दै उनले स्थानीय सरकारले ट्रयाक खोल्ने काम गरिसकेकोले अब संघीय सरकारले त्यसलाई कालोपत्रे गर्ने धारणा राखे । मदन मण्डारी लोकमार्ग सल्यान भएरै जानुपर्ने भन्दै उनले त्यसमा आफ्नो पहल रहने बताए ।
सल्यानका संघीय सांसद तथा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले संघीय सरकारले विद्युतीकरण तथा सडक कालोपत्रेका योजनालाई महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने धारणा राखे ।
स्थानीय सरकारको पुँजीले नभ्याउने योजनालाई संघले कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा स्थानीय कला, संस्कृति झल्कने नृत्य तथा गाउँपालिकाको आफ्नै गीत भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले स्थानीय कला, संस्कृतिको सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने बताए ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले दार्मा गाउँपालिका सल्यानकै सबैभन्दा दुर्गम गाउँपालिका भएपनि निकै छिटो विकासको गति लिएको बताए । सडक, सिंचाई, स्वास्थ्यलाई प्रदेशले विशेष प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले सबै विकासका कार्यमा प्रदेश सरकारको साथ रहने धारणा राखे ।
सिंचाईका योजना चाँडो पूरा गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन गाउँपालिकालाई उनले शुभकामना दिए । कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य उमाकान्त शर्मा, जिल्ला समन्वय समिति सल्यानका प्रमुख केशबहादुर विष्ट, नेकपा सल्यानका अध्यक्ष गोविन्दकुमार पुन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश प्रमुख वीरेन्द्र प्रकाश अग्रहरी, नेपाली काँग्रेस सल्यानका सभापति गणेश चन्द, अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश मल्ललगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीको अध्यक्षता तथा उपाध्यक्ष टीका शर्मा ओलीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरू भएको कार्यक्रमको सञ्चालन वडा नं. ४ का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर रावतले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा जनएकता युवा क्लवले स्वागत नृत्य प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त अवसरमा सेरेङ्गे नाचलगायत स्थानीय कला, संस्कृति झल्कने विभिन्न गीत तथा नृत्यहरूसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
संघीय सरकारको १ करोड ५२ लाख ५० हजार र स्थानीय सरकारको १ करोड १५ लाखमा गाउँपालिकामा बिजुली पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले बताए ।
छवटा वडामा ३ हजार ६ सय ४० घरधुरी रहेकोमा वडा नं. ५ बाहेकका १ हजार ५ सय घरधुरीमा शाखा लाइन विस्तारपश्चात् बिजुली पुग्ने उनले जानकारी दिए । हालसम्म ३३ घरधुरीले बिजुलीको मीटर लगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।जितेर महिलाविरूद्ध हुने भेद्भावलाई पराकाष्ठा गर्दै हिड्न सफल भएकी छ ।
असारे खर्चले फ्रिज